မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြရန်လိုအပ်ဟု ကချင်လွှတ်ေ?? - Yangon Media Group
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြရန်လိုအပ်ဟု ကချင်လွှတ်ေ??
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ – မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြသင့်နေ ပြီဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ မဲ ဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဂျေ ယောဝူက ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်က ရန် ကုန်မြို့ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ Real Link Hotel ၌ ကျင်းပသည့် က ချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများ နှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် အထက်ပါအ တိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဂျေယောဝူက”မြစ်ဆုံစီမံ ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ ကို ချပြစေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် သုံးနှစ်ကျော်လာပြီ ဘာမှချမပြသေး ဘူး။ ချပြခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူတစ် ရပ်လုံး သိသွားမယ် လုပ်ပေးပါလို့ လဲ အော်ချင်အော်မယ်။ မလုပ်ပါ နဲ့လို့လဲ အော်ချင်အော်မှာပေါ့။ ဒါ ကြောင့် ပြည်သူကို ချပြသင့်ပါတယ်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဆုံးဖြတ်ပါစေ” ဟု ပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထား သည်မှာ ခုနစ်နှစ် ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်ပြီး တိကျသည့်အဖြေတစ်စုံ တစ်ရာ ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိ သေးကြောင်း သိရသည်။
ဦးဂျေယောဝူက”မြန်မာနိုင် ငံသူ နိုင်ငံသားတွေက အခု ဒီမြစ် ဆုံ စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ရ အောင် ကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ သူ တစ်ယောက်မှမတွေ့ဘူးသေး ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပူတာအို တစ်ခရိုင်လုံးကလည်း အပြီးရပ်ဖို့ ကန့်ကွက်ပေးပါဆိုပြီးပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြီးသတ်ရပ်လိုက်ဖို့ ပဲ အစိုးရကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ တစ်ပူ အောင်မြင်သွားပြီလို့ ယူ ဆပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခင်အစိုးရလက်ထက်က လည်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြည်သူ များအကျိုးအတွက် ကန့်ကွက် ကြောင်း အဆိုကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို အပြီးတိုင် ရပ်ဆိုင်းရန် သာ ဆန္ဒရှိကြောင်း ဦးဂျေယောဝူ က၏အဆိုအရ သိရသည်။
ယင်းပွဲသို့ တက်ရောက် လာသည့် တစညပါတီ ရန်ကင်း မြို့နယ်မှ ဦးဇင်မောင်မောင်ဌေးက ”ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကချင်ပြည် နယ် အရေးတစ်ခုတည်း မဟုတ် ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်း သား အားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားအ တိုင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တံတားကြီးပေါ်၌ စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်
သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ အရောင်းကျလာသဖြင့် လုပ်ငန်းများ လျော့နည်းလ?
နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်ရန် အဆင့်မြင့်သနပ်ခါး ထုတ်ကုန်သုံးမျိုး စတင်ထုတ်လုပ်
နိုင်ပွဲများ အသီးသီးရခဲ့ပြီးနောက် အင်္ဂလန်နှင့် ဂျာမနီတို့ ခြေစစ်ပွဲအောင်
”ဖြူဖြူ့ရဲ့ အဆိုတော်သက်တမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်း အပုဒ် ၁ဝဝ ရှိ?
ထိုင်းအလုပ်ရှင် ခေါင်းပုံဖြတ်ထားသော လုပ်အားခ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၅ သိန်း မြန်မာ အလုပ်သမားများ ပြ?